Degmada Mahadaay oo kamid noqotay meelaha uu ku fatahay wabiga Shabeelle. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR HIR-SHABELLE Degmada Mahadaay oo kamid noqotay meelaha uu ku fatahay wabiga Shabeelle.
Degmada Mahadaay oo kamid noqotay meelaha uu ku fatahay wabiga Shabeelle.
Muqdisho(SNTV);- Guddoomiyaha degmada Mahadaay Axmed Xuseen Afrax oo la hadlay Radio Muqdisho,ayaa sheegay in Fatahaada Wabiga Shabeelle uu ka sameeyay deegaanada hoos yimaada degmadiisa ay saameyn ku yeesheen dadkii beeraladeyda ahaa oo ay ka baabi’iyeen dalagyadii ay beerteen.
Wuxuu sheegay Guddoomiye Axmed Xuseen Afrax,in Wabiga Shabeelle oo uu ka fatahay deegaano ku yaalo Waqooyiga degmada Mahadaay cagta mariyay dhul beereed lagu qiyaasay 25-km oo ku yaalay dalagyada nuucyadooda kala duwan sida Galeyda,Digirta,Yaanyada,qaraha iyo Sisinta,isagoona dhanka kale tilmaamay in Biyaha Fatahaada ay baabi’iyeen 40-kun oo hektar.
Sidoo kale,Guddoomiyaha degmada Mahadaay Axmed Xuseen Afrax oo sii hadlayay ayaa sheegay in fatahaada oo sii fideysay darteed ay u xirmeyn waddooyin muhiim u ahaa isku socodka dadka iyo gaadiidka ee degmadaasi.
Wuxuu sheegay in Madaxda Maamulka Hirshabeelle uu ku wargeliyay arrintaan,islamarkaana ay dadaalkeeda ku jiraan sidii tallaabo loo qaado lahaa looguna gurman lahaa dadka ay Fatahaada saameysay.
Deegaano badan oo ka tirsan Hirshabeelle ayaa waxaa ka jira Fatahaad uu sameeyay Wabiga Shabeelle oo mara deegaano iyo degmooyin ka tirsan Gobollada Hiiraan iyo Shabeelle dhexe,waxaana hadda meelaha ugu daran ee Fatahaada ay saameysay ka mid ah magaalada Baladweyne oo dad badan ay ka barakaceen.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa wado dadaalo loogu gurmanayo dadka ku waxyeelobay Fatahaada Wabiyada Jubba iyo Shabeelle ay ka kala sameeyeen Hiiraan iyo Gedo.
Previous articleTaliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo la kulmay dhiggiisa dalka Jabuuti
Next articleKulan dhexmaray Hay’adaha u xilsaaran dib-u-eegista Dastuurka iyo Ururada Dhallinyarada